`` ဝိုင်နီ၊ နီ '' - အာဖရိကရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာသင်္ကေတများ၏အဓိပ္ပာယ်
"ဝိုင်နီ၊ အနီရောင်" - အာဖရိကရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာသင်္ကေတများ၏အဓိပ္ပါယ်
By နေပြည်တော် On အောက်တိုဘာ 19, 2020
အာဖရိကန်ဂျာနယ်လစ်များမှကျွန်ုပ်တို့၏ပေးစာတွင်မီဒီယာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပြဆရာ Joseph Warungu ကရွေးကောက်ပွဲရာသီအတွက်ပြင်ဆင်ထားသောကြောင့်အာဖရိကတွင်အာဏာကိုရှာဖွေရာ၌အရောင်များနှင့်သင်္ကေတများသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှအရေးကြီးရကြောင်းကိုဆန်းစစ်ထားသည်။
ဝိုင်နီကိုမှတ်မိလား မဟုတ်ပါ၊ သင့်ခံစားချက်များကိုလွတ်မြောက်စေနိုင်သည့်ပုလင်းထဲရှိအရာများမဟုတ်ပါ။
ငါ Red Red Wine ... ဗြိတိသျှရက်ဂေးတီးဝိုင်း UB40 ရဲ့မျက်နှာဖုံးအကျော်အမော်တွေထဲကတစ်ခုပါ။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင်ယူကေနှင့်ယူအက်စ်တွင်နံပါတ်တစ်နေရာသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
Robert Kyagulanyi အမည်ရှိအမတ်တစ် ဦး သည်သူ၏အနီရောင်အမျက်မထွက်ဘဲရှားပါးစွာတွေ့မြင်ခဲ့ရသောပါလီမန်အမတ်သည်လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင်သမ္မတနေရာအတွက်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လိုသည်။
သို့သော်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေဖြင့် National Unity Platform ပါတီအားရွေးကောက်ပွဲတွင်အရောင်များကိုတရားဝင်အသုံးပြုခွင့်မပြုရန်တားမြစ်ပြီးနောက်ဘိုဘီ ၀ ိုင်သည်အနီရောင်ကိုတွေ့မြင်ရသည်ဟုအခြားပါတီတစ်ခုကပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေါက်တာ Isaac Owusu-Mensah
"သင်္ကေတကလွယ်လေလေ၊ ပိုကောင်းတဲ့ ပါတီများသည်၎င်းတို့၏မဲဆန္ဒရှင်များထံရောက်ရှိရန်ဖြစ်သည်။ အချို့ကမျှော်လင့်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးတွင်အသက်ရှင်ခြင်းတို့နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၏သင်္ကေတတစ်ခုထားခြင်းသည်ကောင်းသည်ဟုထင်မြင်ကြသည်” ဟုဒေါက်တာ Isaac Owusu ကပြောကြားသည်။ -Mensah, နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဌာန၊ အကြီးတန်းကထိက, ဂါနာတက္ကသိုလ်။
သူသည်ဥပမာအားဖြင့်ဂါနာ၏ဒီဇင်ဘာရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါ ၀ င်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အဓိကပါတီနှစ်ခုအားအသုံးပြုသည်။
“ အတိုက်အခံ NDC ပါတီမှာထီးတစ်ချောင်းရှိတယ်၊ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကတော့အထူးသဖြင့်ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာသင်ဟာထီးအောက်မှာရှိနေနိုင်တယ်” လို့ဒေါက်တာအိုဝူဆင် - မင်ဆာကပြောပါတယ်။
“ လက်ရှိအာဏာရှိတဲ့နျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံမှာဆင်ကြီးကြီးရှိတယ်။ သူတို့သည်သင်၏လမ်းပေါ်ရှိမည်သည့်ပြwithနာကိုမဆိုဖျက်ဆီးနိုင်သည်။ သင်ဒုက္ခရောက်နေသည့်အခါဆင်ကိုသာသွားလိုက်ရုံနှင့်သင်သွားလိုသည်။ "
ကင်ညာစွမ်းဆောင်ရည်အထူးကုဒေါက်တာ Mshai Mwangola ကအနောက်အရောင်များသည်သင်္ကေတနည်းပါးသည်ဟုထင်ရကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်
ဥပမာအားဖြင့်အနီရောင်သည်ယူကေရှိလက်ဝဲအလုပ်သမားပါတီနှင့်ဆက်စပ်သည်၊ သို့သော်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိကွန်ဆာဗေးတစ်ရီပတ်ဘလီကန်ပါတီဖြစ်သည်။ အမေရိကန် - ဗြိတိသျှကွန်ဆာဗေးတစ်များသည်လစ်ဘရယ်ဖြစ်သောအမေရိကန်ဒီမိုကရက်များနှင့်အပြာရောင်ဝေမျှခဲ့သည်။
“ ဒီအာဖရိကမှာလူတွေကဒီအရောင်တွေဟာအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝတယ်ဆိုတာသိကြတယ်။ နိုင်ငံရေးဟောပြောချက်ကိုစာဖတ်ခြင်းမှာအလွန်ရှုပ်ထွေးတယ်၊
“ အနီရောင်ဟာပျောက်သွားတဲ့သွေးကိုပုံဆောင်တယ်။ အနက်ရောင်သည်များသောအားဖြင့်တိုင်းပြည်၏ပြည်သူများကိုကိုယ်စားပြုပြီးအစိမ်းရောင်သည်ပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်သူတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်မြေနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
ဤအရာသည် Dr. Owusu-Mensah ၏အမြင်ဖြစ်သည်။
“ ဒီနေရာကနိုင်ငံရေးပါတီတွေအတွက်အနီရောင်ကအရမ်းအရေးကြီးတယ်။ NPP တွင်အနီ၊ အပြာနှင့်အဖြူရှိသည်။ NDC ကိုသွားတဲ့အခါမှာသူတို့မှာအနီရောင်၊ အဖြူနဲ့အစိမ်းလည်းရှိတယ်။ အကြီးတန်းပါတီအရာရှိများကသွေးသည်အနီရောင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာအရောင်၌ဘဝရှိကြောင်းနှင့်ပါတီသည်ထို့ကြောင့်ဘဝကိုဆိုလိုသည်။ "
ကင်ညာနိုင်ငံ၏ ၂၀၀၅ အခြေခံဥပဒေဆန္ဒခံယူပွဲတွင်ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ဖက်အားသင်္ကေတများကိုသတ်မှတ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည်နှစ်ဖက်စလုံးအားမျှတမှုမရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများမရရှိနိုင်သောညင်သာပျော့ပျောင်းသောအခြေခံသင်္ကေတများကိုရှာဖွေခဲ့သည်။
ဂီနီ - အောက်တိုဘာ ၁၈
ဆေးရှဲ: အောက်တိုဘာ 22-24
တန်ဇန်းနီးယား: အောက်တိုဘာလ 28 ရက်
အိုင်ဗရီကို့စ် - အောက်တိုဘာ ၃၁
ဂါနာ - ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်
ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ - ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်
နိုင်ဂျာ: ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်
ယူဂန်ဒါ: ဇန်နဝါရီ ၁၀ - ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၈
လိမ္မော်သီးနှင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်ငှက်ပျောကိုဘာလုပ်နိုင်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ ဟီရီရီယာကန့်ကွက်မှုများဖြင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွင်နိုင်ငံရေးရုန်းကန်မှုအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရသည်။
ဒဏ္ဍရီပုံပြင်ကင်ညာလူမျိုးများသည် ၂၀၀၅ ဆန္ဒခံယူပွဲ၏ "Yes" နှင့် "No" နှစ်ဖက်စလုံးအတွက်ရွေးချယ်ထားသောအသီးများသင်္ကေတများနှင့်အတူပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသည်
ရွေးကောက်ပွဲတွင်အနိုင်ရရှိခဲ့သောနိုင်ငံရေးအုပ်စုသည် ၄ ​​င်း၏နိုင်ငံရေးပါတီအသစ်၏အမည်အဖြစ်လိမ္မော်ရောင်ကိုကျင့်သုံးသည်။
ယနေ့ ၀ န်ကြီးချုပ်ဟောင်း Raila Odinga ဦး ဆောင်သော Orange Democratic Movement (ODM) သည်ကင်ညာနိုင်ငံ၏အဓိကအတိုက်အခံပါတီဖြစ်သည်။
တားမြစ်ထားသော "စုန်းအတတ်" သင်္ကေတများ
သို့သော် ၂၀၁၈ ဇင်ဘာဘွေစစ်တမ်းတွင်တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်းအမှတ်အသားအားလုံးသည်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ကြိုဆိုကြသည်မဟုတ်။
ဇင်ဘာဘွေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (Zec) တွင်ရှိသည် အချို့သောတိရိစ္ဆာန်များနှင့်လက်နက်များအပါအ ၀ င်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရဲ့အမှတ်တံဆိပ်တွေပေါ်မှာအရာအားလုံးကိုပိတ်ပင်ထားပါတယ် .
သူတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာအရဆိုရင် Zec ဟာအာဖရိကမှာရွေးကောက်ပွဲတွေအများကြီးရှိတာမို့ "juju" ဒါမှမဟုတ် witchcraft တို့ကအနိုင်ရပြီးရွေးကောက်ပွဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့မှာပါ။
ဖရဲသီးသည်အရည်ရွှမ်း။ အရသာရှိသောအသီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ကင်ညာတွင်ယုတ်ညံ့သည့်နိုင်ငံရေးသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည် ကွန်ကရစ် - အပြင်ဘက်ရှိအစိမ်းရောင်နှင့်မာကျောသော၊ အတွင်းပိုင်းတွင်အနီရောင်၊
ဒေါက်တာ Owusu-Mensah ကသင်္ကေတများသည်အလွန်အစွမ်းထက်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏အမှန်တကယ်လက္ခဏာကိုမကြာခဏအစားထိုးသည်။
ကင်ညာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရွာတရွာမှာကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာတုန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တမ်းကြာအမတ်အမတ်ရဲ့အမည်ဟာ Tawa ဆိုတဲ့မီးခွက်လို့အမြဲထင်ခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုချင်းစီမှာမီးခွက်ကသူရဲ့အမှတ်အသားပဲ "
ဂျိုးဇက် Warungu သင်တန်းဆရာ
“ ငါဟာဂါနာမြောက်ပိုင်းကမဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုကပါ။ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူတို့ဘယ်သူ့ကိုမဲပေးမလဲဆိုတာကိုဖြေဆိုသူတွေကိုမေးခဲ့တယ်။ သူတို့ထဲက ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်ဆင်သို့မဟုတ်ထီးသင်္ကေတကိုသာအသုံးပြုကြသည်။ ပါတီသို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတို့၏အမည်ကိုသူတို့မဖော်ပြခဲ့ပါ။ "
ကင်ညာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရွာတရွာမှာကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာတုန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တမ်းကြာအမတ်အမတ်ရဲ့အမည်ဟာ Tawa လို့အမြဲထင်ခဲ့တယ်၊ ဆိုလိုတာကငါ့ဒေသဘာသာစကားမှာမီးခွက်ကိုဆိုလိုတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆီမီးခွက်ဟာရွေးကောက်ပွဲတိုင်းမှာသူ့ရဲ့သင်္ကေတဖြစ်လို့ပဲ။ သူ့ပတ် ၀ န်းကျင်သည်ရွာတစ်ရွာကိုဖြတ်သန်းသွားသောအခါwholeရိယာတစ်ခုလုံးသည် "Tawa!" ၏ရွတ်ဆိုသံများဖြင့်ပြည့်နေခဲ့သည်။ Tawa! "
ဒါပေမယ့်သူကသူ့မီးခွက်ဟာအားနည်းနေတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံရမယ်။ ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုမဖော်ပြနိုင်ဘူး။ သူသည်ထိုဒေသသို့လျှပ်စစ်မီးမပေးနိုင်။ မိုးရာသီတွင်ဖြတ်သန်း။ မရသည့်လမ်းများကိုတိုးတက်အောင်မလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါ။
ဒေါက်တာ Mwangola ကသဘောတူသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အာဖရိကရှိအရောင်များနှင့်သင်္ကေတများ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ရန်အလွန်ကောင်းသော်လည်း၊ လိုက်နာခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကျရှုံးသည်။
ဒဏ္ဍရီပုံပြင်ယူဂန်ဒါသမ္မတမူဆယ်ဗီနီသည်သူ၏နောက်ဆုံးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်းအဝါရောင် ၀ တ်ဆင်ခဲ့သည်
မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနှင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုသင်္ကေတများမှာတာ ၀ န်ယူခြင်းမပြုရ။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်မီးခွက်၏သင်္ကေတရှိခဲ့လျှင်သို့မဟုတ်ပုဆိန်၊ လယ်ထွန်စက်သို့မဟုတ်ခြင်္သေ့ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်ဂရုမစိုက်ပါ။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေတောင်တောင်မကိုင်ဘူး။ သင်္ကေတများ။ "
ယူဂန်ဒါအစိုးရသည်သင်္ကေတ၏စွမ်းအားကိုအပြည့်အဝနားလည်သည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကသူသည် ၀ တ်နီကိုတရား ၀ င်စစ်တပ်၏အ ၀ တ်အထည်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကို ၀ တ်ဆင်သူများကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့သည်။ Bobi Wine လည်းဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလျစ်လျူရှုရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပုံရသည်ပေမယ့်။
သမ္မတ Yoweri Museveni ဦး ဆောင်သောအာဏာရ NRM ပါတီ၏အဝါရောင်အားဖြင့်ဒေါသကိုကိုယ်စားပြုရန်ဘိုဘီဝိုင်သည်အနီရောင်ကိုရွေးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုဒေါက်တာ Mwangola ကယုံကြည်သည်။
"အဝါရောင်နေရောင်နှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်၏။ ကျန်တဲ့ယောက်ျားတွေကတော့“ မဟုတ်ဘူး၊ ငါတို့စိတ်တိုနေတယ်။ "... သူကစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ကတိကဝတ်များ၏အနီရောင်အားဖြင့်တန်ပြန်ခဲ့ပါတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။
“ အဝါရောင်ကကြွယ်ဝမှုကိုဆိုလိုတယ်၊ ဒါပေမယ့်အနီရောင်က 'ဘယ်သူ့အတွက်ကြွယ်ဝမှုရှိသလဲ။ ""
ယူဂန်ဒါမဲဆန္ဒရှင်များသည်ဇန်နဝါရီလတွင်အနီရောင်လာသည်ကိုတွေ့လျှင် Bobi Wine သည် State House မှ ၀ ိုင်နီများကိုဆက်လက်ထုတ်ယူနေ ဦး မည်ဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါးသည် https://www.bbc.com/news/world-africa-54554978 တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်
နေပြည်တော် 1667 ရေးသားချက်များ0မှတ်ချက်များ
Deauville ပွဲတော် - Kristen Stewart နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း - ဗီဒီယို
Bencharki Zamalek ၏ပထမဆုံးခြေထောက်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်
Bencharki သည် Zamalek ပထမ ဦး ဆုံး - teles relay ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည် လွန်ခဲ့သော 1 လက
[…] တနင်္ဂနွေနေ့တွင်၎င်းတို့၏အာဖရိကချန်ပီယံလိဂ်ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်တွင်ရော့ကတ်စကလပ်ဘန် ၁-၀ ကိုတနင်္ဂနွေနေ့တွင်အနိုင်ရရှိ […]
Sahel - teles relay မှလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေကိုတုန့်ပြန်ရန်ကုလသမဂ္ဂသည်ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကိုအင်္ဂါနေ့တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည် လွန်ခဲ့သော 1 လက
[…]“ ဝိုင်နီ၊ အနီရောင်” ကိုလည်းဖတ်ပါ။ အာဖရိကရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာသင်္ကေတများ၏အဓိပ္ပာယ် […]
ငွေဥပဒေများ - ချိုးဖောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်အတွက်လျှို့ဝှက်ချက် ၂၁ ခု - ဗီဒီယို - ရုပ်သံလွှင့် လွန်ခဲ့သော 1 လက